» XOG WARAN: Shaqsi si aad ah loo hadal hayo in loo magacaabo Xilka R/wasaaraha Somalia..Badweyntimes.com
XOG WARAN: Shaqsi si aad ah loo hadal hayo in loo magacaabo Xilka R/wasaaraha Somalia..
Odayaasha Beelaha Mudulood, Habargidir iyo Murursade oo kawada tirsan beesha Hawiye ayaa dadaal dheeraad ah ugu jira sidii qof ka soo jeeda beelahaas loogu magacaabi lahaa jagada Ra’iisulwasaare-nimada dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, taas oo ay garwadeen ka yihiin xubno caan ah.
Warar hoose ayaa xaqiijinaya in Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ay suuragal tahay in loo magacaabo jagada Wasiirka koowaad ee dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, xili ay soo baxayaan warar kala gedisan oo la xariira qofka qabanaya jagadan.
Axmed Macalin Fiqi wuxuu horey u soo qabtay jagada Taliyaha guud ee ciidamada Nabadsugida & Sirdoonka Qaranka oo uu wax badan ka qabtay, dadka yaqaana ayaa ku sifeeya shaqsi si dhaw ula socda arrimaha gudaha Soomaaliya.
Horey wuxuu Jaamacad uga soo baxay dalka Suudaan, sidaas oo kalena wuxuu saameyn ku dhex lahaa baarlamaanka Faderaalka ee doortay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana lagu tirayaa saaxiibada Madaxweynaha cusub.
Mr, Fiqi haddii uu noqdo Ra’iisulwasaaraha cusub ee Soomaaliya waxay taasi meesha ka saaraysaa hamiga beesha Mudulood ay ku doonaysay xilkaas, waxaana hadda la sadaalinayaa Isbedel siyaasadeed.
« Warbixinta Ka HoreysayAkhri Warbixin Caalami ah: Caqabadaha Waaweyn ee horyaala Mudane FARMAAJO…
Warbixinta Xigto »DAAWO: Reer Baydhabo oo iska tuuray Sawirka Shariif Xasan, kuna bedalay midka Farmaajo…